Kuisa Mabhuku eZvapupu zvaJehovha Pawebsite Yako
Nharireyomurindi—Yekudzidza | April 2018
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Altai Alur Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Dutch Edo Efik Esan Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Nei zvisingabvumirwi kuti munhu aise pawebsite yake kana pasocial media mabhuku nezvimwewo zvinobudiswa neZvapupu zvaJehovha?
Nemhaka yekuti hatitengesi mabhuku edu nezvimwewo zvatinobudisa zvine chekuita neBhaibheri, vamwe vanofunga kuti kuzvikopa kana kuzviisa pane mamwe mawebsite kana pasocial media kunobvumirwa. Zvisinei, kuita izvozvo kutyora Mitemo Inoda Kutevedzerwa * yemawebsite edu uye izvi zviri kukonzera matambudziko akakura. Sezvakajekeswa muMitemo iyoyo, hapana munhu anobvumirwa ‘kuisa paIndaneti (chero imwe website, nzvimbo yekugovana mafaira, kana kuti pamasocial network) mifananidzo yakaita zvekudhirowewa, mabhuku, zviratidzo, mimhanzi, mapikicha, mashoko uye mavhidhiyo zvakatorwa panzvimbo ino.’ Nei izvi zvichirambidzwa?
Hapana anobvumirwa kuisa pane mamwe mawebsite mabhuku edu nezvimwewo zviri pasi pemitemo yeuridzi
Zvinhu zvese zviri pamawebsite edu zviri pasi pemitemo yeuridzi. Vanhu vakatsauka pakutenda nevamwe vanotipikisa vanoedza kushandisa mabhuku edu nezvimwewo pamawebsite avo kuitira kuti vakwezve Zvapupu zvaJehovha nevamwewo. Chinangwa chemawebsite iwayo ndechekuti vaverengi vasava nechokwadi nezvatinotenda. (Pis. 26:4; Zvir. 22:5) Vamwe vanoshandisa zviri mumabhuku edu kana chiratidzo chedu chejw.org pakushambadzira, vamwe vanochiisa pazvinhu zvavanotengesa uye pamapurogiramu epamafoni nematablet. Nekuita kuti kodzero dzedu (copyright) uye zviratidzo zvedu (trademarks) zvidzivirirwe, tine mvumo yepamutemo yekudzivisa zvinhu zvakadaro. (Zvir. 27:12) Asi kana tikasiya vamwe vanhu, kunyange vatinonamata navo, vachiisa zvinhu zvedu pane mamwe mawebsite kana kushandisa chiratidzo chejw.org pakutengesa zvinhu zvavo, vematare vanogona kusatitsigira patinoedza kurambidza vanotipikisa nevanoita zvekutengesa kuti vaite izvozvo.
Kudhaunirodha mabhuku edu pane mamwe mawebsite asiri jw.org kunogona kuva nengozi. Jehovha akapa “muranda akatendeka, akangwara” chete basa rekupa vanhu zvekudya zvekunamata. (Mat. 24:45) “Muranda” iyeye anoshandisa mawebsite ake epamutemo chete pakubudisa zvekudya zvekunamata, ayo anoti: www.jw.org, tv.jw.org, uye wol.jw.org. Uye tine mapurogiramu epamutemo matatu chete epamafoni nematablet nemakombiyuta, ayo anoti: JW Language®, JW Library®, uye JW Library Sign Language®. Tinogona kuva nechivimbo chekuti zvinhu izvi hazvina kusvibiswa nenyika yaSatani uye hazvibudi mashoko ekushambadza. Kana zvekudya zvekunamata zvikambopfuura nemumaoko evamwe vanhu, hatigoni kuziva kuti zvakachinjwa kana kusvibiswa here kana kuti hazvina.​—Pis. 18:26; 19:8.
Kuwedzera pane izvi, kuisa mabhuku edu pamawebsite ekuti vanhu vanogona kunyora zvavanofunga kunopa mukana wekuti vakatsauka pakutenda nevamwe vanotishora vaite kuti tisavimba nesangano raJehovha. Dzimwe hama dzakakwezvwa kuti dziitisane nharo nevanhu paIndaneti uye dzakaita kuti zita raJehovha riwedzere kuzvidzwa. Nzvimbo yepaIndaneti yekunyorerana mashoko haisi iyo yakakodzera ‘pakurayiridza neunyoro vaya vasingadi.’ (2 Tim. 2:23-25; 1 Tim. 6:3-5) Zvakaonekwawo kuti vamwe vakavhura maakaundi emasocial network enhema muzita resangano, Dare Rinotungamirira uye nhengo dzaro. Zvisinei, hapana kana nhengo imwe chete yeDare Rinotungamirira ine website yayo kana akaundi pasocial network chero ipi zvayo.
Kuudza vanhu nezvejw.org kunobatsira pakuparadzira “mashoko akanaka.” (Mat. 24:14) Zvinhu zvepamafoni nematablet zvatinopiwa kuti tishandise pabasa rekuparidza zviri kuramba zvichivandudzwa. Tinoda kuti munhu wese abatsirwe nazvo. Saka sezvinoratidzwa muMitemo Inoda Kutevedzerwa, unogona kutumira munhu bhuku redu pae-mail kana kupa munhu link yezvimwe zviri pajw.org. Kana tikaita kuti vanhu vazive nezvemawebsite edu epamutemo, tinenge tichivaratidza nzira imwe chete yechokwadi yekuwana nayo zvekudya zvekunamata, “muranda akatendeka, akangwara.”
^ ndima 1 Unogona kuona Mitemo Inoda Kutevedzerwa kana ukaenda nechepazasi pepeji yekutanga yepajw.org, wobaya pakanzi “MITEMO YEKUSHANDISA.” Mitemo iyoyo inoshanda pazvinhu zvese zviri pamawebsite edu.
Tingava Sei Nerusununguko Rwechokwadi?
Shumira Jehovha, Mwari Werusununguko
Varume Vakagadzwa​—Dzidzai Kubva Kuna Timoti
Kutevedzera Jehovha​—Mwari Anokurudzira Vanhu Vake
Kurudziranai “Kunyanya” Iye Zvino
Vechidiki, Muri Kuisa Pfungwa Pazvinangwa Zvekunamata Here?
NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA April 2018
Mibvunzo Inobva Kuvaverengi—December 2018
Mibvunzo Inobva Kuvaverengi​—November 2018